टेकु अस्पतालका सबै बेड कोरोना संक्रमितले भरिए, परिसरमै पाल टाँगेर उपचार गर्ने तयारीमा – Health Post Nepal
टेकु अस्पतालका सबै बेड कोरोना संक्रमितले भरिए, परिसरमै पाल टाँगेर उपचार गर्ने तयारीमा
२०७८ वैशाख १६ गते १९:०५
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीका लागि बेड अभाव भएपछि अस्पतालले परिसरमा पाल टाँगेर उपचारसेवा दिने भएको छ।
६० शय्या रहेको अस्पतालमा हाल ६८ कोरोना बिरामीको उपचार भइरहेको छ।
अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले अस्पताल परिसरमा थप २० जना संक्रमितलाई पाल टाँगेर भए पनि उपचार गर्ने योजनामा रहेको बताए।
‘सबै बेड भरिएका छन्। उपचार गर्न आउने मानिसको लाम छ। बेड छैन। चाहेर पनि उपचार दिन सकिएको छैन,’ डा. राजभण्डारीले भने,’ मानव हौँ। बिरामीको दुःख देख्न सकिन। अब अस्पताल परिसरमा पाल टाँगेर भए पनि उपचार गछौं।’
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा सबै बेड कोरोना संक्रमितले भरिएका छन्। यसले गर्दा बिरामीको चाप व्यवस्थापन गर्न अस्पताललाई हम्मे पर्न थालेको छ।
क्षमताभन्दा बढी बिरामी आउँदा नयाँ बिरामीलाई भर्ना गर्न नसकिने अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले बताए।
हाल अस्पतालमा ६८ जना बिरामीको उपचार भइरहेको छ। जसमध्ये ९८ प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमितलाई अक्सिजन दिनु परेको डा. राजभण्डारीले बताए।
‘हामीसँग ६० बेड मात्र छन्। तर, एउटै बेडमा दुई जना राखेर पनि उपचार गराइरहेका छौं,’ डा. राजभण्डारीले हेल्थपोस्ट सँगको कुराकानीमा भने, ‘ आकस्मिक कक्षमा समेत राखेर उपचार भइरहेको छ।’
हाल अस्पताल आएका संक्रमितको अक्सिजनको मात्रा न्युन भएका छन्।
अस्पतालमा २२ बेड आइसीयु छ। तर, बिरामीको प्रकृति हेर्दा अधिंकास बिरामीलाई आइसीयु चाहिने अवस्था देखिन्छ। ‘अधिकांश बिरामीलाई आइसियु सेवा चाहिने भएको छ। तर, हामीले अक्सिजन दिएर सबै बिरामीलाई व्यवस्थापन गरेका छौं,’ उनले भने।
लकडाउनले गर्दा उपत्यकामा बसोबास गर्ने अधिंकास नागरिक गाउँ फर्किएका छन्। स्थानीय तहले उचित व्यवस्थापन नगर्दा झनै भयावह अवस्था आउने विज्ञले अनुमान गरेका छन्।
‘गाउँ फर्किएर गएका व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा नबस्दा कोरोना संक्रमण फैलाउने निश्चित छ। जसले गाउँमा भएका आमा–बुबा मृत्युमा मुखमा पुग्ने छन्,’ डा. राजभण्डारी भन्छन्, ‘अबका दिन झ्न कष्टकर बन्ने देखिन्छ।’
टेकुमा भर्ना भएका अधिंकास संक्रमित युवा नै छन्। दैनिकजसो एक–दुई जना संक्रमितको मृत्यु हुने गरेको अस्पतालको तथ्यांक छ।
छात्रवृत्तिका चिकित्सकलाई लिएर तालिम दिई बिरामीको उपचार गराइरहेको उनले बताए।
सरकारले टेकु अस्पताललाई ३ सय बेडको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, हालसम्म पनि यो निर्णयको अनुरूप कुनै काम हुन सकेको छैन। सरकारले गरेको सो निर्णय नारामा मात्रै सीमित भएको आरोप डा. राजभण्डारीको छ।
‘न त स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल निर्माण गर्नमा कुनै पहल गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना छ। यत्रो बजेट थियो। मन्त्रालयले कुनै मतलव नै गरेको छैन,’ उनी भन्छन्।
कोरोना महामारीको बेलामा पनि टेकु अस्पताल प्राथमिकतामा पर्न नसकेको डा. राजभण्डारीको भनाई छ।
‘छिमेकी देशमा एक हप्तामा नै ठूला–ठूला पूर्वाधार सहितको अस्पताल निर्माण भयो। तर, हाम्रो देशमा एक बर्ष बित्तिसक्दा कुनै काम भएन,’ राजभण्डारीले भने।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनँहु बढ्दै गएको छ। बिहीबार मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या ५ हजारनजिक पुगेको छ।
त्यस्तै, २४ घन्टामा ३५ संक्रमितको निधन भएको छ। नागरिकले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना नगरेमा झ्न भयावह अवस्था आउने विज्ञले बताउँदै आएका छन्।
डा. सागर राजभण्डारी
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल